ငွေဖြင့်ဝယ်ယူခံ တရားမ၀င်တရုတ်ဇနီးများ လက်ဆင့်ကမ်းရောင်းချခံရမှုများရှိလာ
တရုတ်နိုင်ငံသို့ရောင်းစားခံရသည့် မြန်မာအမျိုးသမီးများမှာ တရုတ်အမျိုးသားက တရားမ၀င်ဇနီးမယားအဖြစ် ပေါင်းသင်းပြီး ၎င်းတို့အနေဖြင့် တရုတ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် တရားဝင် လက်ထပ်နိုင်သည့်အခါ ငွေဖြင့်ဝယ်ထားသည့် မြန်မာအမျိုးသမီးအား တခြားလူတစ်ဦးထံ ယွမ်ငွေ(၃)သောင်းနှင့်အထက် (မြန်မာငွေကျပ်သိန်းသုံးဆယ်နှင့်အထက်)ငွေကြေးများဖြင့် လက်ဆင့်ကမ်း ရောင်းချမှုများရှိကြောင်း နေပြည်တော် လူကုန်ကူးမှုတားဆီးရေးရဲတပ်ဖွဲ့မှ သိရသည်။
“အရင်တုန်းကတော့ လူကုန်ကူးတဲ့ပွဲစားတွေက လိမ်လည်ပြီးတော့ စုဆောင်းတယ်။ အခု နောက်ပိုင်းကျတော့ သူတို့ (ပွဲစား တွေ)က ပေါ်တင်စည်းရုံးတာပေါ့နော်။ တရုတ်မယား လုပ်ရမယ်။ ၆လပြည့်ရင် ပြန်လာလို့ရတယ်။ ရွှေတွေ ဘယ်လောက် ဆင် ပေးမယ်။ အိမ်အတွက် ဘယ်လောက်ပေးမယ် ဆိုပြီးတော့ ဒါမျိုးတွေနဲ့စည်းရုံးလာတယ်။”ဟု နေပြည်တော်လူကုန်ကူးမှု တားဆီးရေး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသို့ လူကုန်ကူးမှုများအတွက် လူကုန်ကူးမှုတားဆီးရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ လွယ်ဂျယ်-ကျန့်ဖုန်း၊ မူဆယ်-ရွှေလီ၊ လောက်ကိုင် နမ့်ခမ်းစသည့် မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်၃နေရာ၌ နှစ်နိုင်ငံလူကုန်ကူးမှု ပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ နယ်စပ် ဆက်ဆံရေးရုံးများ ဖွင့်လှစ်ကာ လူကုန်ကူးမှုလျော့ကျရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
“ အခု လူကုန်ကူးနေကြတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ ကိုယ်တိုင်က အရင် တရုတ်မယားအဖြစ် ရောင်းစားခံရဘူးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ များတယ်၊ သူတို့ကိုယ်တိုင် ဒီအလုပ် ပြန်လုပ်နေကြတာတွေ့လာရတယ်” ဟု မူဆယ်တည်းခိုခန်းလုပ်ငန်းအသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ယခုနှစ်ဇန်န၀ါရီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၉)လတာကာလအတွင်း လူကုန်ကူးမှု(၆၉)မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အနက် (၄၂)မှုမှာ တရုတ်ဇနီးမယားအဖြစ် အဓမ္မထိမ်းမြားလက်ထပ်ရန် ရောင်းစားခဲ့သောအမှုများဖြစ်သဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှု့၏ ၆၀%ခန့်မှာ တရုတ်နိုင်ငံသို့ တရုတ်မယားအဖြစ် ရောင်းစားခဲ့မှုများဖြစ်ကြောင်း လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နှင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့စာရင်း များအရ သိရသည်။
မူဆယ်မြို့ပန်းနေကြာတည်းခိုခန်း၌ ရန်ကုန်မြို့မှ မိန်းကလေးများကို တရုတ်မယားအဖြစ်ရောင်းစားမည့် လူကုန်ကူးအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကို ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလ ပထမအပတ်အတွင်းက ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း နေပြည်တော်လူကုန်ကူးမှု တားဆီးနှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သိရှိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ သတင်းပေးချက်အရ မူဆယ်မြို့ ပန်းနေကြာ တည်းခိုခန်း၌ ရန်ကုန်မြို့ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်မှ ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူအမျိုးသမီး ၃ ဦးအား တရုတ်မယားအဖြစ် ရောင်းစားရန်ခေါ်လာသော ဒေါ်စောဥမ္မာ(ခ)မဥမ္မာ ဆိုသူနှင့် ရန်ကုန်မြို့မှ အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား တရုတ်မယားအဖြစ်ရောင်းစားရန် ခေါ်ဆောင်လာသည့် မောင်ခန့်ကိုကိုနှင့် မမြတ်ဆုမွန် လင်မယားတို့အား ဖမ်းဆီးရရှိမိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အောက်တိုဘာလ(၆)ရက်နေ့ နံနက်(၉)နာရီက လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စုမှူးရုံး(မူဆယ်)သို့ တာဝန်သိပြည်သူ တစ်ဦးမှ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ခေါ်ဆောင်လာပြီး ထိုအမျိုးသမီးမှာ ရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး လူကုန်ကူးပွဲစားများထံမှ ထွက်ပြေလွတ်မြောက်လာသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုကာ လာရောက်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဆက်လက်မေးမြန်းရာ လူကုန်ကူးခံရခြင်းမှ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူဖြစ်ကြောင်း နောက်ထပ်၎င်းနှင့် ဘ၀တူနှစ်ဦး တည်းခို ခန်း၌ ကျန်သေးသည်ဟု ထွက်ဆိုခဲ့သည်။
၄င်းအမျိုးသမီးအား မေးမြန်းရာ၌ ဒေါ်စောဥမ္မာ(ခ)မဥမ္မာဆိုသူက ရန်ကုန်မြို့မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်မှ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ အမျိုးသမီး(၃)ဦးကို တရုတ်ပြည်တွင် အလုပ်ပေါကြောင်း၊ တရုတ်ယောက်ျားယူလျှင် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် နေရ မည်ဖြစ်ပြီး ကျပ်သိန်း၂၀၊သိန်း၃၀ရမည်။ အပျိုဖြစ်စေ၊အအိုဖြစ်စေ မင်္ဂလာဆောင်ပေးကာ ကလေး(၁)ယောက် မွေးပေးပြီးလျှင် ပြန်လာလို့ရသည်ဟု လိမ်လည်စည်းရုံးကာ မူဆယ်မြို့သို့ ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ရန် မူဆယ်မြို့ ပန်းနေကြာတည်းခိုခန်း၌ တည်းခိုနေစဉ် မူဆယ်မြို့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နင်းရေးတပ်ဖွဲ့စုများက ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့အတူ အောက်တိုဘာလ(၆)ရက်နေ့နံနက်(၁၁)နာရီအချိန်ခန့်က တာဝန်သိပြည်သူတစ်ဦးမှ မူဆယ်မြို့(၅၅၅)လမ်းရှိ ပန်းနေကြာတည်းခိုခန်းတွင် မင်္သာကာဖွယ်ရှိသော အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးတို့ တည်းခိုနေကြောင်း သတင်း ပေးပို့ရာမှ တဆင့်တရုတ်နိုင်ငံ၊ရှမ်းတုန်းပြည်နယ်ရှိ တရုတ်အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့် အိမ်ထောင်ကျနေသူ မမြတ်စုမွန်(ခ)ပုံ့ပုံ့၊ မောင်ခန့်ကိုကိုနှင့် တရုတ်နိုင်ငံရွှေလီမြို့တွင် နေထိုင်သူ မသီသီအောင်တို့ပူးပေါင်း၍ မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ မြန်မာအမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦးအား ယွမ်ငွေ ၃ သောင်းဖြင့် တရုတ်မယားအဖြစ် ရောင်းစားရန်ကြိုးပမ်းခဲ့မှုကို မူဆယ်လူကုန်ကူးမှု တားဆီးနှိမ်နင်း ရေးတပ်ဖွဲ့စုမှ ဖမ်းဆီး ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
လူကုန်ကူးမှုပြစ်ဒဏ်များ၌ လူ ၃ ဦးနှင့်အထက် ပူးပေါင်းဂိုဏ်းဖွဲ့ကာ လူကုန်ကူးမှုကျူးလွန်ပါက အနိမ့်ဆုံးထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ မှ ထောင်ဒဏ်တစ်သက်အထိ ချမှတ်ခံရနိုင်သည့်အပြင် ငွေဒဏ်လည်းချမှတ်နိုင်ကြောင်း လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နှင်းရေး ရဲတပ် ဖွဲ့မှ သတင်းများအရ သိရသည်။
အသန့်ရှင်းဆုံးအိမ်တွေမှာတောင်ပိုးဟပ်၊ယင်ကောင်၊မှတ် စတဲ့ အကောင်
By- Good Health
ကျပ်သိန်း ၄၈၀၀ ကျော် အကုန်အကျခံ ကြက်၊ ဘဲဈေး တည်ဆောက်မည် ဟု ဆို
မန္တလေးမြို့တော် ကြက်၊ ဘဲဈေးကို လာမည့် ၂၀၁၃-၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ကျပ်သိန်းပေါင်း ၄၈၀၀ ကျော် အကုန်အကျခံ တည်ဆောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ ဈေးနှင့် သားသတ်ဌာန အကြီးတန်း အရာရှိတစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
“နေရာကိုလည်း ရွေးချယ်ပြီးပြီ၊ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ကလည်း ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ အခုလောလောဆယ် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေအတွက် မြေညှိဖို့ လုပ်နေပေမယ့် မိုးရွာထားတော့ မြေတွေက ဗွက်ထနေလို့ လုပ်ငန်းစလို့ မရသေးဘူး” ဟု အဆိုပါ ကော်မတီဈေးနှင့် သားသတ်ဌာန တာဝန်ရှိသူက ဆိုသည်။
အဆိုပါ မန္တလေး ကြက်၊ ဘဲဈေးကို ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် မဲကင်းကုန်းကျေးရွာနှင့် ကျွဲရည်ကုန်း ကျေးရွာအနီး ကွင်းအမှတ် ၄၉၅ ရှိ မြေဧရိယာ ၄ ဒသမ ၃၅ ဧကပေါ်တွင် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ၏ ဘတ်ဂျက် ကျပ်သိန်းပေါင်း ၄၈၀၀ ကျော် အကုန်အကျခံပြီး မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ အဆောက်အအုံနှင့် ကုန်ရုံဌာနက တာဝန်ယူ တည်ဆောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းထံမှ သိရှိရသည်။
“ကြက်ဘဲဈေးရှိတော့ ကောင်းတာပေါ့။ အခုဟာက အသားထုတ်လုပ်ဖို့ထက် ကြက်မွေး၊ ကြက်တောင်၊ ကြက် အညစ်ကြေးကို ဘယ်လို စွန့်ပစ်ရမှန်း မသိရတာက ဒုက္ခတစ်ခုလို ဖြစ်နေတယ်။ အိမ်ရှေ့ ရေနုတ်မြောင်းထဲကို ကြက် အညစ်ကြေးတွေကျရင် စည်ပင် သန့်ရှင်းရေးဌာနက အရေးယူတယ်။ အခုဆောက်မယ့် ဈေးမှာ အမှိုက်သန့်စင်စနစ် ပါတဲ့အတွက် အနည်းဆုံးတော့ အမှိုက်သရိုက် ကိစ္စကို သိပ်အာရုံ မစိုက်ရတော့ဘူးပေါ့” ဟု မဟာအောင်မြေ မြို့နယ် အခြေစိုက် ကြက်ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ကိုင်သူ ဦးဝင်းက ဆိုသည်။
အဆိုပါ တည်ဆောက်မည့် ကြက်၊ဘဲ ဈေးတွင် လူနှင့် ကြက်နေရန်အတွက် အဆောက်အအုံ ၁၂ လုံး တည်ဆောက်ရန် အစီအစဉ် ရှိထားသော်လည်း ဘတ်ဂျက် အနေအထားအရ ကနဦးအနေနှင့် ခန့်မှန်း ကြက်ကောင်ရေ ၅၀,၀၀၀ ကျော်နှင့် လူ ၆၀ ကျော် နေထိုင်နိုင်သည့် အဆောက်အအုံ ခြောက်လုံး၊ အိမ်သာ၊ လျှပ်စစ် ထစရန်စဖော်မာ၊ ရေဆိုးမြောင်း၊ ရေသန့်ရှင်းရေး စနစ်နှင့် အိမ်သာ၊ ဝန်ထမ်း အိမ်ရာတို့ကို ဦးစွာ တည်ဆောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါဌာနထံမှ ထပ်မံသိရသည်။
“သားသတ်ရုံတွေမှာ တိ/ကု ဆရာဝန်တွေ ရှိတယ်လေ။ အဲဒီဆရာဝန်တွေက အသားထုတ်လုပ်မယ့် တိရစ္ဆာန်မှာ ရောဂါကင်းရှင်းမှ အသား ထုတ်လုပ်ခွင့်ပေးတာ။ အခုကြက်သတ်ရုံ မရှိတော့ လူတွေက ကြက်ကို ဖြစ်သလို ကြုံတဲ့နေရာမှာသတ်ပြီး ဈေးမှာ ရောင်းနေကြတာ။ ကြက်သတ်ရုံ တကယ် ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန် တစ်ယောက်အနေနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မန္တလေးသား တစ်ယောက် အနေနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကြိုဆိုတယ်” ဟု မဟာအောင်မြေမြို့နယ်ရှိ ပွင့်ဦးဆေးခန်းမှ ဒေါက်တာဇော်ဇော်က ဆိုသည်။
နန်းဝိုးဖန်၏ ခင်ပွန်း ဂျပန်နိုင်ငံသားကို မြန်မာ့မြေဈေးကို ဘယ်လိုကစားပြီး ဘယ်လိုထောင်ကျသွားခဲ့သလဲ
မှတ်မိကြဦးမယ်ထင်ပါတယ် ဂျပန်နိုင်ငံသားနဲ့ လက်ထပ်ထားတဲ့ တိုင်းရင်သူလေးတစ်ယောက် စသုံးလုံးရုံးပေါ်ကနေ ပြုတ်ကျသေဆုံးသွားတဲ့ သတင်း....
အခု သူ့ရဲ့ အမျိုးသား ဂျပန်နိုင်ငံသားကို စွဲချက်တင်တဲ့ သတင်းတစ်ခု ဖတ်လိုက်ရတယ်... အဲဒီမှာ လွတ်တော်အမတ် ဆိုတဲ့လူက ဂျပန်နိုင်ငံသားဖက်ကနေ သက်သက်ညှာညှာစဉ်းစားဖို့ ပြောနေတာ တွေ့ရတော့ အံ့သြမိတယ်....
သူတို့တွေ ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတော့ မြို့အပြင်က ရပ်ကွက်တွေမှာ ဒေါင့်ကျတဲ့ နေရာတွေ အချက်ချာကျတဲ့ မြေကွက်တွေကို အရင်ရအောင်ဝယ်တယ်... သူတို့လက်ထဲကို အချက်ချာကျတဲ့ မြေတွေ ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ရပ်ကွက်အတွင်းပိုင်းက မြေကွက်ကို တစ်ဖက်လက်နဲ့ ဘယ်လိုမှ မပေါက်တဲ့ ဈေးပေးပြီး ဝယ်တယ်....
ရပ်ကွက်အတွင်းပိုင်းက မြေတွေတောင် ဒီဈေး ရနေပြီဆိုတော့.... အဲဒီအရှိန်နဲ့ ဒေါင့်ကွက်တွေ အချက်ချာကျတဲ့ နေရာတွေက မြေဈေးတွေ ပိုတက်လာတယ်... အဲဒီအချိန်ကျမှ တက်ဈေးနဲ့ ရိုက်ထုတ်တာ....
ဒါတောင် အမှုမှာ မိတာ ဒီတစ်မှုတည်းရှိသေးတယ်.... သံလျှင်ဘက်ထွက်ကြည့် တောင်ဒဂုံဘက် ထွက်ကြည့် ဗမာစကားတောင် မပြောတတ်တဲ့ တရုတ်တွေ ခြေရှုပ်နေကြတာ တစ်ပုံကြီးပဲ....
အဲဒီလိုနဲ့ ရန်ကုန်မြို့က မြေဈေးတွေ ခေါင်ခိုက် အဲဒီဒါဏ်ကို ခါးစည်းခံနေရတာ ရန်ကုန်မြို့ အခြေခံလူတန်းစားတွေ....
အခုနေ တစ်လကို သုံးသိန်း ဝင်တယ်ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်က လခ ကောင်းတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်.... အဲဒီလူတစ်ယောက်တစ်ယောက်အတွက် ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေး တစ်ခု ပိုင်ဖို့ ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်.... ရှိလား.....
အဲဒီတော့ တစ်လကို သုံးသိန်းတောင် မဝင်တဲ့ ရန်ကုန်က လူအများစုအတွက် သူတို့ဘဝရဲ့ အိမ်လေးတစ်အိမ် ပိုင်ဆိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက် ဘယ်နားရောက်သွားလဲ......
အဲလို ဝိသမ လောဘသားတွေနဲ့ အဲဒီလုပ်ရပ်တွေကို လျစ်လျူရှုနေတဲ့ တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုလဲ အံ့သြလို့ မဆုံးဖြစ်မိတယ်....
အန်ဒမန်ပင်လယ်အတွင်းမှ မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သား ၁၃ လောင်း ဆယ်ယူရရှိ
ဘန်ကောက်၊ အောက်တိုဘာ ၁၃
ထိုင်းနိုင်ငံ ရနောင်းဆိပ်ကမ်းအလွန် အန်ဒမန်ပင်လယ်အတွင်း နစ်မြုပ်ခဲ့သော လှေတစ်စင်းမှ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား ၁၃ လောင်းတွေ့ရှိကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ရေကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှသိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညက တိုက်ခတ်ခဲ့သော မုန်တိုင်းကြောင့်နစ်မြုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းရေကြောင်းရဲမှူး အကရတ်သ် အာရွန်ကပြောသည်။
စနေနေ့ညနေအထိ အမျိုးသားအလောင်း ၁၂ လောင်းနှင့် အမျိုးသမီးအလောင်း ၁ လောင်းတို့ကိုဆယ်ယူရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
နစ်မြုပ်သွားသောလှေမှာ ကော့သောင်းမှ ရနောင်းသို့လာသောလှေတစ်စင်းဖြစ်ပြီးမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား ၃၀ ခန့်ပါဝင်ကြောင်းသိရသည်။
ref: 13 bodies of Myanmar migrants recovered(Bangkok post)
၁၃.၁၀.၂၀၁၃ရက်နေ့ ၀၂၀၀နာရီအချိန်တွင်ထောက်ကြန့်နယ်မြေရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် အင်းစိန်ဆေးရုံ၌ ဓါတ်လိုက်သေဆုံးသည့် အမျိုးသားတစ်ဦးရောက်ရှိနေကြောင်း သတင်းအရ
သွားရောက်စစ်ဆေးရာ သေဆုံးသူမှာ ငြိမ်းဇော်၊ နွယ်ခွေကျေးရွာ၊
ထောက်ကြန့်မြို့နေသူဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ၁၂.၁၀.၂၀၁၃ရက်နေ့ ၂၃၀၀နာရီအချိန်တွင် ယန်ယန်ခေါက်ဆွဲစက်ရုံအတွင်း
ခြေချော်ပြီး ဘွိုင်လာဘေးရှိ မော်တာအား ခြေဖြင့်တိုက်မိရာမှ
မော်တာ၌တပ်ဆင်ထားသော လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးပြတ်ကာ ဓါတ်ကြိုးနှင့်ထိမိဓါတ်လိုက်ခဲ့သဖြင့် ယာလက်ခုံပွန်း၊ အောက်နှုတ်ခမ်းပွန်း
ဒဏ်ရာများရရှိ၍ အင်းစိန်ဆေးရုံသို့ပိုအပ်ခဲ့ရာ သေဆုံးသွားကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသဖြင့် ထောက်ကြန့်နယ်မြေ ရဲစခန်း
ပြည်ရထားဝန်ထမ်းဟောင်း မိသားစုများကို ဝန်ထမ်း အိမ်ရာမှ ဖယ်ရှားပေးရန် သတိပေး
ပြည်၊ အောက်တိုဘာ ၁၁
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်ပိုင်း) ပြည်မြို့ မီးရထားနယ်မြေ စက်ခေါင်းရုံရှိ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတွင် နေထိုင်သူ ရထား ဝန်ထမ်းဟောင်း မိသားစုများကို မီးရထားပိုင်မြေ ကျူးကျော်သူများဟု သတ်မှတ်ကာ တာဝန်ရှိသူများက ဖယ်ရှားရန် သတိပေးစာ ထုတ်ထားကြောင်း ဖယ်ရှားခံရသော မိသားစုဝင်များထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ယခုနှစ်တွင် သတိပေးစာ လေးကြိမ်တိုင်တိုင် ထုတ်၍ ဖယ်ရှားခိုင်းသော ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ဟောင်းတွင် နေထိုင်သူများသည် သေဆုံးသွားပြီ ဖြစ်သော ရထားဝန်ထမ်းဟောင်း၏ မိသားစုများ ဖြစ်ကြပြီး အိမ်ငှားခ စပေါ်ပေးရန် ငွေကြေး မတတ်နိုင်သည့် လက်လုပ်လက်စားများ ဖြစ်သည့်အပြင် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား များလည်း ရှိသဖြင့် နေရာ ပြောင်းရွှေ့ပေးရန် အခက်အခဲများ ရှိကြောင်း မီးရထား နယ်မြေ အတွင်းတွင် နေထိုင်သူ ဦးကျော်သောင်းက ပြောကြားသည်။
“၁၉၇၈ ခုနှစ်တည်းက နေလာတာပါ။ ယောက္ခမက တွဲစစ်မှူးပါ။ ဒီလိုနေရာ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ရဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ သားနဲ့၊ မြေးတွေလည်း မီးရထားမှာ ဝန်ထမ်း ပြန်လျှောက်ခဲ့တယ်။ မရခဲ့ဘူး။ ဆိုက္ကား နင်းရတဲ့ အခြေအနေနဲ့ အိမ်စပေါ်တင်ဖို့တောင် မလွယ်ပါဘူးဗျာ” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
သတိပေး အကြောင်းကြားစာ ထုတ်ပြန်ထားသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ မီးရထားမြေ ကျူးကျော် သူများကိုလည်း သတိပေး အကြောင်းကြားစာ ထုတ်ပြန်ထားကြောင်း မြန်မာ့မီးရထား ရန်ကုန်တိုင်း တာဝန်ခံက ပြောကြားသည်။
စက်ရုံဝင်းရှိ ဝန်ထမ်းအိမ် ၂၁ အိမ်မှာ ကျူးကျော်မြေ ဖြစ်၍ တရားဝင်စာနှင့် ဖယ်ရှားခိုင်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိ နေသူများတွင် ဝန်ထမ်းဟောင်းများ၏ မိသားစု မဟုတ်သည်များလည်း ရှိ ကြောင်း၊ ဖယ်ရှားရန် နောက်ဆုံး သတ်မှတ်ရက်မှာ နို့တစ်စာတွင် မပါကြောင်း ပြည်ဘူတာ စက်ခေါင်းစက်ရုံ အလုပ်ရုံမှူး ဦးသန်းဦးက ပြောကြားသည်။
“ဝန်ထမ်းအိမ်ရာဆိုတာ လုပ်ငန်းခွင်ထဲ ရှိစဉ်ပဲ ခံစားခွင့် ရှိပါတယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ဖယ်ရှားပေးရမည့် နောက်ဆုံး သတ်မှတ်ရက် မပါရှိသော်လည်း သီတင်းကျွတ်တွင် ဖယ်ရှားခိုင်းပြီး အိမ် ၂၁ လုံးတွင် နေထိုင်သော လူဦးရေ ၅၀ ခန့်မှာ အခြေခံ လူတန်းစားများ ဖြစ်နေသည့်အတွက် ဖယ်ရှားခြင်း မပြုရန် အသနားခံမည် ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ဟောင်းတွင် နေထိုင်သူ မိသားစုများထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
စက်ရုံဝင်းအတွင်း ကျူးကျော်တဲများကြောင့် စက်ရုံ လုံခြုံမှု မရှိသဖြင့် ဌာနဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ ပျောက်ဆုံးနိုင်ခြင်း၊ မီးဘေးလုံခြုံမှု စိုးရိမ်ရခြင်း၊ မသမာသူများနှင့် ဆက်စပ်ကာ ပေါက်ကွဲစေနိုင်ခြင်း၊ ဥပဒေနှင့် မလွတ်ကင်းသူများ ခိုအောင်း နေထိုင်၍ ပြဿနာ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်း၊ စက်ရုံတွင်း ပြင်ပလူများ နေခွင့် မရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဖယ်ရှားပေးရန်ဟု သတိပေးစာတွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ထိုင်ခုံတစ်လုံး ရုတ်တရက် ပေါက်ကွဲ အမျိုးသမီး တစ်ဦး ဒဏ်ရာ ပြင်းထန်စွာ ရရှိ
တရုတ်နိုင်ငံ ဖူကျန့် ပြည်နယ်တွင် အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ်ရှိ မိန်းကလေး တစ်ဦးသည် ကွန်ပျူတာ ရှေ့တွင် ထိုင်နေစဉ် ၄င်းထိုင်နေသော ထိုင်ခုံမှာ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ မိန်းကလေးသည် လွင့်စင် လာခဲ့သည့် စတီး အပိုင်းအစများ သူမ၏ ခန္ဓာကိုယ် အတွင်းသို့ ထိုးဖောက်ဝင် ရောက်ခဲ့သဖြင့် ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာ ရရှိခဲ့ပြီး သူမ၏ ခန္ဓာကိုယ် အတွင်းမှ ဝက်အူလှည့်ပေါင်း များစွာနှင့် ပလတ်စတစ် အပိုင်းအစများကို အရေးပေါ် ခွဲစိတ် ကုသ၍ ဖယ်ရှားပေး ခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
၄င်းမိန်းကလေးသည်ရေချိုးပြီးနောက် ကွန်ပျူတာ စားပွဲရှေ့ရှိ ထိုင်ခုံတွင် ထိုင်၍ လေမှုတ် စက်ဖြင့် သူမ၏ ဆံပင်ကို အခြောက်ခံနေစဉ် သူမထိုင်နေသည့် ထိုင်ခုံက ရုတ်တရက် ထ၍ ပေါက်ကွဲခဲ့ မှုကြောင့် သတိမေ့ သွားခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ မိန်းကလေး၏ အစ်ကို ဖြစ်သူက ဆိုသည်။
ယင်းမိန်းကလေး ထိုင်နေသော ထိုင်ခုံတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် ဂက်စ်ထားရှိရာ နေရာ၏ ဖိအားကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ဟန်တူကြောင်း ထိုင်ခုံစက်ရုံမှ ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ကြောင်း Dangnan နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာက ဖော်ပြ ခဲ့သည်။
ဗိုက်ခေါက်ထူဗိုက်ပူပြီး အဆီ များနေသူတွေအတွက်လက်တွေ့(၇ )ရက်အတွင်း သိသိသာသာ ဗိုက်ချပ်ပြီး အဆီကျစေတဲ့ဆေးနည်းလေးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်
အိမ်မှာရှိတတ်တဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေကို ရောစပ်ပြီး အသုံးပြုရမှာပါ ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့သံပုရာသီး၊အုံးဆီ ဆေးပူ(ဒဏ်ကြေလိမ်းဆေး) တို့ကို တစ်ခါလိမ်းရုံ ရောစပ်ပြီး လိမ်းပေးရမှာပါ
သံပုရာသီး တစ်လုံးရဲ့ ၅ ပုံ တစ်ပုံလောက်ကို လှီးပြီးအကြမ်းပုဂံလုံးထဲကို အရည်ညှစ်ပါ... အကြမ်းပုဂံလုံးထဲသို့ အုံးဆီ သုံးလေးစက်လောက် ထည့်ပေးပါ ထို့နောက်လိမ်းဆေးတစ်မျိုးမျိုး ( ဂဠုန်ရာဇာ,မိဂသီ,ရှမ်းရိုးမ,လင်ဇီး) ကိုတစ်ခါလိမ်းစာအနေတော်ထည့်ပြီး မွှေပေးပါ...
ညအိပ်ယာဝင်ခါနီးတိုင်း ဆေးကို ရင်ခေါင်းမှ ၀မ်းဗိုက်သို့ အထက်မှအောက်သို့ ဆွဲချပြီး အသားထဲစိမ့်ဝင်အောင် ပွတ်လိမ်းပေးပါ... ခါးတွင်အဆီရှိပါကခါးမှ ချက်သို့ ပွတ်လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်... တစ်ပါတ်အတွင်း သိသာစွာဗိုက်ချပ်လာသည်ကို... လက်တွေ့ တွေ့မြင် ခံစားရမှာပါ(ညစာကို ပုံမှန်ထက လျှော့စားပေးရင်ပိုပြီးသိသိသာသာ ဗိုက်ချပ်စေပါတယ်)တစ်ပါတ်အတွင်းသိသိသာသာအဆီနှင့်အခေါက်များ လျှော့ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်...
posted by နှင်းဆီဖူးလေးများ-Love BUDS
MNL Cup 2013 ချန်ပီယံဆုဖလား ကမ္ဘောဇ အသင်း ပထမဆုံး ဆွတ်ခူး
ရန်ကုန်၊ သုဝဏ္ဏကွင်းတွင် အောက်တိုဘာ ၁၂ရက် ညနေ ၄နာရီက
MNL Cup 2013 ချန်ပီယံပွဲစဉ်တွင် ကမ္ဘောဇ အသင်းနှင့် မကွေး အသင်းတို့ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ရာ
ကမ္ဘောဇ အသင်းက (၁-၀)ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရရှိကာ ချန်ပီယံ ဆုဖလားအား ပထမဆုံး အကြိမ် အဖြစ် ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ကြောင်းMFFမှသိရသည်။
ကမ္ဘောဇ အသင်းအတွက်တစ်လုံးတည်းသော အနိုင်ဂိုးအား တိုက်စစ်မှူး စိုးမင်းဦးက ပွဲကစားချိန် ၄၃မိနစ်တွင် သွင်းယူပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ချန်ပီယံ ကမ္ဘောဇ အသင်းအား တစ်ဦးချင်း ဆုတံဆိပ်များ၊ ငွေကျပ် သိန်း(၂၀၀)နှင့်အတူ ချန်ပီယံ ဆုဖလား၊
ဒုတိယ ဆုရရှိခဲ့သည့် မကွေး အသင်းအား တစ်ဦးချင်း
ဆုတံဆိပ်များနှင့် အတူ ငွေကျပ် သိန်း(၁၀၀)၊တို့အား
မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် တာဝန်ရှိသူများက
လူနစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ရသော ချမ်းမြေ့တည်းခိုခန်း ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွင် လိုအပ်သော စစ်ဆေး အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် တည်းခိုခန်းတွင် လာရောက် တည်းခိုနေထိုင်သူများကို တောင်ငူမြို့ပေါ်မှ ထွက်ခွာခွင့် တားမြစ်ထားကြောင်း တောင်ငူမြို့ မြို့မ ရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူများနင့် အမှတ် (၁၇) ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖြစ်သူက ပြောကြားသည်။
တောင်ငူမြို့ (၁၇) ရပ်ကွက် ကန်လမ်းရှိ ချမ်းမြေ့ တည်းခိုခန်းတွင် အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်နေ့ည ၈ နာရီ မိနစ် ၅၀ အချိန်က ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားရာ အသက် ၂၉ နှစ် အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးနင့် အသက် ၂၂ အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦး သေဆုံးပြီး အခြားလူတစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း မျက်မြင်တွေ့ရှိသူများထံမှ သိရသည်။
“ကျွန်တော်က ပေါက်ကွဲသံကြားလို့ အခန်းအပြင် ထွက်ကြည့်တော့ အခန်းတံခါးတွေ ကျိုးပဲ့ပျက်စီးနေပြီး လူတစ်ယောက်က ခုံကျိုးတွေကြားမှာ သွေးတွေ အိုင်ထွန်းပြီး လဲကျနေပါပြီ။ ပထမတော့ မိုးကြိုးပစ်တယ်လို့ ထင်တာ။ မိုးတွေကလည်း ရွာနေတော့” ဟု အခင်းဖြစ်ပွားရာ တည်းခိုခန်း အခန်းအမှတ် ၃ တွင် ရန်ကုန်မြို့မှ လာရောက် တည်းခိုနေထိုင်သူ ဦးဝေသိန်းက ရှင်းပြသည်။
လယ်ဝေးမြို့မှ လာရောက် တည်းခိုနေထိုင်သူ မီးရထားရဲတပ်သား အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ်ရှိ ဦးနေမျိုးကျော် ဆိုသူသည် အခင်းဖြစ်ပွားရာ ချမ်းမြေ့တည်းခိုခန်း အပေါ်ထပ် အခန်း ၆ /B တွင် ရှိနေပြီး ညောင်လေးပင်မြို့မှ လာရောက် တည်းခို နေထိုင်သူ အသက် ၂၄ နှစ် အရွယ်ရှိ ဒေါ်ယုခိုင်နှင့် အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် ဒေါ်ငြိမ်းသူဆိုသူတို့ နှစ်ဦးသည် အခန်း ၆ တွင် ရှိနေစဉ် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု တောင်ငူမြို့ မြို့မရဲစခန်း၏ ကနဦး စစ်ဆေးချက်များအရ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
အဆိုပါ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် မီးရထား ရဲတပ်သား နေမျိုးကျော်မှာ အခင်းဖြစ်ပွားရာ နေရာ၌ သေဆုံးခဲ့ပြီး ဒေါ်ယုခိုင် ညောင်လေးပင်မြို့နယ် မြို့မ (၄) ရပ်ကွက် နေသူမှာလည်း တောင်ငူ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကို တင်ပို့ ကုသနေစဉ် အဆိုပါည ၁၁ နာရီ ၃၀ မိနစ်အချိန်တွင်သေဆုံး ခဲ့ကြောင်း တောင်ငူမြို့ မြို့မ ရဲစခန်းမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
အခင်းဖြစ်ပွားသည့် နေ့တွင် ချမ်းမြေ့ တည်းခိုခန်း၌ လာရောက် တည်းခိုနေသူ ၁၁ ဦးခန့် ရှိနေပြီး ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် သေဆုံးသူ အမျိုးသမီးနှင့် အဖော်ဖြစ်သူ ဒေါ်ငြိမ်းသူတို့ နှစ်ဦးသည် အဆိုပါ တည်းခိုခန်းတွင် လာရောက် တည်းခိုလေ့ရှိပြီး မည်သည့် အလုပ်လုပ်သည်ကို မသိရဘဲ ကျန်တည်းခိုနေသူ အများစုမှာ ကုမ္ပဏီ ဝန်ထမ်းများသာ ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ တည်းခိုခန်းနှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး တောင်ငူမြို့ မြို့မရဲစခန်းက (ပ)၅၃၅/၂၀၁၃ ပေါက်ကွဲစေတတ်သော အက်ဥပဒေပုဒ်မ -၃ အရ အမှုဖွင့် အရေးယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး တောင်ငူခရိုင် ဖြူးမြို့နယ် ရန်ကုန်-မန္တလေး လမ်းဟောင်း စာတိုက်ရုံးရှေ့တွင် ရပ်တန့်ထားသော လိုက်ထရပ် အဖြူရောင် ခရီးသည်တင် ကားတစ်စီးပေါ်တွင် အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီခွဲအချိန်ခန့်က ပေါက်ကွဲနိုင်သေးသော လက်လုပ်ဗုံး တစ်လုံးကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး တောင်ငူမြို့နယ် စစ်မြေပြင် အင်ဂျင်နီယာတပ်ရင်း (၉၁၁) မှ ဖြူးမြို့ နယ်မြေခံတပ်ရင်းသို ပို့ဆောင်ကာ ဖျက်ဆီး ပစ်ခဲ့ရသေးကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းများထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
မိုးစက်ဝိုင်နှင့်ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှုများ ထပ်မံထွက်ပေါ်
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း၌ Miss Universe Myanmar မိုးစက်ဝိုင်နှင့်ပတ်သက်သော အငြင်းပွားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာများ အွန်လိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာပြီး ဝေဖန်ငြင်းခုံမှုများ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင်းက ဆီဒိုးနားဟိုတယ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော Miss Chinese Myanmar 2009 ပြိုင်ပွဲတွင် မိုးစက်ဝိုင်သည် တရုတ်အမည် (Yang Xinrong) ဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သောကြောင့် Miss Universe ပြိုင်ပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုမယ်အဖြစ် ၀င်ပြိုင် သင့်၊ မပြိုင်သင့် မြန်မာအွန်လိုင်း သုံးစွဲကြသူများအကြား အငြင်းပွားနေကြခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် မိုးစက်ဝိုင်အကြောင်းကို တရုတ်သတင်းဌာနများနှင့် သတင်းစာများက မစ္စ တရုတ်- မြန်မာ ၂၀၀၉ ဆုရရှိခဲ့သူတစ်ဦးအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုကာ Miss Universe
Myanmar ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည့်အကြောင်းအရာများကို အမွှမ်းတင် ရေးသားနေသည်များကို အချင်းချင်းမျှဝေကြကာ ဝေဖန်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
အွန်လိုင်းတွင် အငြင်းပွားနေသော မိုးစက်ဝိုင်အကြောင်း နှင့် ပတ်သက်၍ Miss Universe Myanmar Organization က ၄င်းတို့၏ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့် အောက်တိုဘာ ၉ ရက် တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် အထက်ပါကဲ့သို့ သတင်းအမှားဖန်တီးနေသူများကို သိရှိသော်လည်း ၄င်းတို့၏ဂုဏ်သိက္ခာကို ထောက်ထားသောအားဖြင့် ရပ်တန့်ပေးပါရန် တောင်းဆိုလိုကြောင်း ရေးသားထားသည်။
Miss Universe Myanmar Organization မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ကိုချမ်းလင်းသူကလည်း မိုးစက်ဝိုင်သည် Miss Chinese Myanmar 2009 ပြိုင်ပွဲ ၀င်ပြိုင်ခဲ့သည်မှာ ဟုတ်မှန်သော်လည်း ပြိုင်ပွဲသည် Miss ပြိုင်ပွဲသီးသန့် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံတကာကုန်သည်ကြီးများအသင်း နှစ်ပတ်လည်ပွဲတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပွဲတစ်ပွဲသာဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
မိုးစက်ဝိုင်၏မိဘများမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် မွေးဖွားသည့် နမ့်ခမ်းရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဖြစ်ကြောင်း ကိုချမ်းလင်းသူက ပြောသည်။ အွန်လိုင်းတွင်ပျံ့နှံ့နေသော ပုံများမှာလည်း ၀တ်စုံ (၃)စုံ ယှဉ်ပြိုင်ရာမှ တရုတ်ရိုးရာဝတ်စုံနှင့် ယှဉ်ပြိုင်မှုများကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ပြောကြားသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ဝေဖန်မှုများကြောင့် ပြိုင်ပွဲအပေါ် တစ်စုံတစ်ရာသက်ရောက်မှုမရှိဘဲ ရုရှားသို့ သွားရောက်ရန် အချိန်ကပ်နေသောကြောင့် မိုးစက်ဝိုင်ကို စခန်းသွင်းလေ့ကျင့်မှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။အင်တာနက်စာမျက်နှာများတွင် မိုးစက်ဝိုင်နှင့် ပတ်သက်၍ ဝေဖန်မှုထွက်ပေါ်သည်မှာ ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပြီး ပထမအကြိမ်ကလည်း အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ မြေးဖြစ်သူနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့ရာ အောက်တိုဘာ ၃ ရက် တွင် ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ယင်းကိစ္စသည် မဟုတ်မှန်ကြောင်း မိုးစက်ဝိုင်က ပြောခဲ့သည်။ ယင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ၌ သတင်းထောက်တစ်ဦးက မိုးစက်ဝိုင်အနေဖြင့် ယခင်က ယခုကဲ့သို့ Miss ပြိုင်ပွဲများ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှု ရှိ၊ မရှိ မေးမြန်းခဲ့ရာ ယခုပွဲကဲ့သို့ ပြိုင်ပွဲကြီးများတွင် မယှဉ်ပြိုင်ဖူးသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏ နှစ်ပတ်လည်ပွဲတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖူးကြောင်း မိုးစက်ဝိုင်က ဖြေကြားခဲ့ဖူးသည်။
မိုးစက်ဝိုင်၏ တရားဝင်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာကိုလည်း အောက်တိုဘာ ၈ ရက်က စတင်ဖွင့်ခဲ့ပြီး ယခုအချိန်အထိ Like လုပ်ထားသူ သုံးသောင်းကျော်ရှိပြီဖြစ်သည်။ ယခုရက်ပိုင်းတွင် ထွက်ပေါ်နေသောသတင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဝေဖန်သူများရှိသလိုပင် မည်သည့်လူမျိုးဖြစ်စေကာမူမြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအဖြစ် ယှဉ်ပြိုင်မည့်သူဖြစ်သောကြောင့် အားပေးကြောင်း ရေးသားထားသူများလည်းရှိကြသည်။
မိုးစက်ဝိုင်သည် နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်တွင် ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့၌ ပြုလုပ်မည့် မယ်စကြ၀ဠာပြိုင်ပွဲသို့ အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက် တွင် သွားရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မြန်မာရေချိုငါးပိ ကောလာဟလနှင့်ပတ်သက်၍ ငါးပိ၊ငါးခြောက်၊ငံပြာရည်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း(ယာယီ) စားသုံးသူများထံ ပန်ကြားချက် ယနေ့ထုတ်ပြန်
ငါးပိ၊ငါးခြောက်၊ငံပြာရည်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း(ယာယီ) က စားသုံးသူများထံပန်ကြားချက် ယနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
၄င်းကြေညာချက်တွင် ယူရီးယားဓါတ်မြေသြဇာ နှင့်ပတ်သက်၍
တစ်ယောက်မှမရှိခြင်းကြောင့်ယုံမှားသံသယမရှိစေရန် စားသုံးသူများထံ မေတ္တာရပ်ခံပြန်ကြားကြောင်းဖော်ပြထားသည်။သုတလင်း
ဇင် ဘာဘွေနိုင်ငံတွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများကို အုပ်စုဖွဲ့မုဒိမ်းကျင့်
ဇင် ဘာဘွေနိုင်ငံတွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများကို အုပ်စုဖွဲ့ မုဒိမ်းကျင့်သည့် ကိစ္စများကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့မှာ ခေါင်းခြောက်နေကြောင်း သိရသည်။ လွန်ခဲ့သော ၁၁ လအတွင်း အမျိုးသား ၆ ဦးမှာ အမျိုးသမီးများက အုပ်စုလိုက် မုဒိမ်းကျင့်မှု ခံခဲ့ရသည်။
ရဲဌာနက ထိုကိစ္စအတွက် ရှက်ပြီး ရဲမတိုင်သော အမျိုးသားများလည်း ရှိနိုင်ကြောင်း သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့သည်။ အသက် ၂၆ နှစ်ရှိ ရဲသားတစ်ဦးသည် ဘူလာဝါယိုတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် အသေးစား မီနီဘတ်စ်တစ်စင်းက အကူအညီတောင်းသဖြင့် သွားရောက်ခဲ့ရာ ကားထဲရှိ အမျိုးသမီး ၃ ဦးက ၎င်းအား ဝိုင်းချုပ်ခဲ့ကြသည်။ ယင်းသည် ရုန်းကန်ရန် ကြိုးစားသော်လည်း မျက်နှာကို မေ့ဆေးဖြင့် အုပ်ခံရပြီးနောက် သတိလစ်သွားကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ အကြီးအကဲ ဩဂက်စတင်းချီဟွာ ကဆိုသည်။ ထို့နောက် ထိုရဲသား သတိပြန်ရလာချိန်တွင် ၎င်းသည် မြို့ပြင်တောအုပ်တွင်း ရောက်နေပြီး အမျိုးသမီး ၃ ဦးက ယင်းကို လိင်ဆိုင်ရာ စော်ကားပြုမူနေသည်ကို သတိပြုမိခဲ့သည်။ ထို့နောက် စိတ်ကျေနပ်သွားသော အမျိုးသမီးများသည် ရဲသားတွင် ပါလာသော ငွေကြေးအနည်းငယ်နှင့် မိုဘိုင်းဖုန်းတို့ကို ရယူကာ ၎င်းအား မြို့ပြင်တွင် ထားခဲ့ပြီး ထွက်ပြေးသွားကြောင်း ချီဟွာက ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုသို့သော လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အကြောင်းရင်းကို မသိရဟု ချီဟွာကဆိုသည်။
ဇင် ဘာဘွေ ဥပဒေအရ မုဒိမ်းမှုသည် အမျိုးသမီးများ ပြုကျင့်ခံရမှသာ အကျုံးဝင်ပြီး အမျိုးသားများအတွက် သတ်မှတ်မထားချေ။ ပြီးခဲ့သည့်လကလည်း အမျိုးသမီး နှစ်ဦးသည် အသက် ၄၄ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးအား ၎င်းတို့နှင့် လိင်ဆက်ဆံရန် အတင်းခိုင်းစေခဲ့သည်။
ထိုစဉ်က ယင်းအမျိုးသားသည် အိပ်ယာတစ်ခုကို ဝယ်လာပြီး ကာရိုးအနောက်ပိုင်းရှိ နေအိမ်သို့ သယ်သွားချိန်တွင် အမျိုးသမီးများက ယခုလို ခိုင်းစေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယမန်နှစ် နိုဝင်ဘာလကလည်း အမျိုးသမီး ၂ ဦးသည် အသက် ၁၈ နှစ် အရွယ် ချာတိတ်တစ်ဦးကို ဟာရာရာရှိ ရိုမန်ကက်သလစ် ဘုရားကျောင်းအတွင်း သော့ခတ်ပိတ်ကာ မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့ကြသည်။ ယခုကဲ့သို့ ရဲသားတစ်ဦးအား မီနီဘတ်စ်ပေါ် လိုက်လာသည့် အမျိုးသမီးများက မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့ကြောင်း သတင်းထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် ပြည်တွင်း သတင်းစာ တစ်စောင်က လမ်းပေါ်မောင်းလာသည့် မီနီဘတ်စ်ကို အလုအယက် ဝိုင်းတားနေသည့် အမျိုးသား အမြောက်အမြားပုံကို ကာတွန်းရေးဆွဲ သရော်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အင်တာနက်သုံးစွဲသူများအားလုံး သိထားရတော့မယ့် ဆယ်သွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မများ
အောက်ပါပြုလုပ်မှုများကို ကျူးလွန်ပါက ထောင်ဒဏ် သုံးနှစ် (သို့မဟုတ်) ငွေဒဏ် (သို့မဟုတ်) ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး
၆၆(ဂ) ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ကို အသုံးပြု၍ ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်ကို
ခိုးယူခြင်း၊ လိမ်လည်ခြင်း၊ အလွဲသုံးစားပြုခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးစေခြင်း။
၆၆(ဃ) ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား ခြောက်လှန့်တောင်းယူခြင်း၊ အနိုင်အထက်ပြုခြင်း၊ မတရားတားဆီးကန့်ကွက်ခြင်း၊ အသရေဖျက်ခြင်း၊ နှောင့်ယှက်ခြင်း၊ မလျော်သြဇာသုံးခြင်း သို့မဟုတ် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း။
အောက်ပါပြုလုပ်မှုများကို ကျူးလွန်ပါက ထောင်ဒဏ် တစ်နှစ် (သို့မဟုတ်) ငွေဒဏ် (သို့မဟုတ်) ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး
၆၈ (က) မမှန်ကန်သော သတင်းအချက်အလက်ကို မရိုးမဖြောင့်သောသဘောဖြင့် ဆယ်သွယ်ခြင်း၊ ဖမ်းယူခြင်း၊ ပို့လွှင့်ခြင်း၊ ဖြန့်ချိခြင်း သို့မဟုတ် ပေးဝေခြင်း သို့မဟုတ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
၆၈ (ခ) သတင်းအချက်အလက် ပို့လွှင့်ခြင်း၊ ဖမ်းယူခြင်း၊ ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ပေးဝေခြင်း သို့မဟုတ် ဖြန့်ချိခြင်းကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ တားမြစ်ခြင်း၊ တားဆီးပိတ်ပင်ခြင်း သို့မဟုတ် နှောင့်ယှက်ခြင်း
မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံး တရားဥပဒေရဲ့ စောင့်ရှောက်မှုကို ခံယူနိုင်ကြပါစေ။
လွှတ်တော်၌ မေးခွန်းမေးမြန်းမှုများကို ဖြေကြားရာတွင် ကျောင်းသားများ အလွတ်ကျက်၍ လာဖြေသည့်ပုံစံ ဖြစ်နေ၍ ပညာရေး ဒုတိယ၀န်ကြီးအား အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ပြစ်တင်ပြောကြား
လွှတ်တော်၌ မေးခွန်းမေးမြန်းမှုများကို ဖြေကြားရာတွင် ကျောင်းသားများ အလွတ်ကျက်၍ လာဖြေသည့်ပုံစံ ဖြစ်နေသဖြင့် ပညာရေး ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒေါက်တာစန်းလွင်အား အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်က ပြစ်တင်ပြောကြားသည်။
အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်က ပြုလုပ်သော အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၀) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးနု၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၁) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုးအောင်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖိုးဇော်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၅) အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဌေးဝင်းတို့၏ ပညာရေးကဏ္ဍနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ၀န်ကြီးဌာန၏ စီမံခန့်ခွဲမှု အခြေအနေ၊ ကျောင်းအဆင့် တိုးမြှင့်ပေးရေး၊ ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်ပေးရေးတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မေးခွန်းမေးမြန်းမှုများအား ဒုတိယ၀န်ကြီး၏ ပြန်လည်ဖြေကြားချက်ကို လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်က ထိုသို့ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကျောင်းအဆင့် တိုးမြှင့်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒေါက်တာစန်းလွင်က "ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာနတွင် ကျောင်းများကို အဆင့်တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ရန် ပထမဦးစွာ ကျောင်းသားဦးရေ၊ နယ်မြေဒေသ အခြေအနေတို့ကို အသေးစိတ် စိစစ်ပြီး ပညာသင်နှစ် (တစ်) နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ်သာ ကျောင်းအဆင့် တိုးမြှင့်ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါတယ်" ဟု ပြောကြားသည်။
ကျောင်းအဆင့် တိုးမြှင့်မှုနှင့်အတူ ပေါ်ထွက်လာသော လစ်လပ်နေရာများအတွက် ဆရာ၊ ဆရာမများ ပြောင်းရွှေ့ရာထူး တိုးပေးရခြင်းတို့ကြောင့် သင်ကြားရေး အစီအစဉ် ထိခိုက်နိုင်သည့်အတွက် တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ်သာ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် မေးခွန်းမေးမြန်းသည့် ကျောင်းများအား အဆင့်တိုးမြှင့်ပေးရန် အစီအစဉ် မရှိသေးကြောင်း၊ ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်ပေးရန်လည်း သတ်မှတ်ခွဲတမ်း ခွဲဝေပြီး ဖြစ်သဖြင့် အစီအစဉ် မရှိသေးကြောင်းနှင့် အခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်း ဖွင့်လှစ်ခွင့် ရရှိရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာကျောင်းမှ မြို့နယ်၊ ခရိုင်၊ တိုင်းဒေသကြီး အဆင့်များသို့ တရားဝင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ အဆင့်ဆင့် တင်ပြထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ဒုတိယ၀န်ကြီးက ပြောကြားသည်။
ထိုသို့ ဒုတိယ၀န်ကြီး၏ ဖြေကြားမှုအား အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်က "ပြောရမှာအားတော့ အားနာတယ်။ ပြောတော့ပြောရမှာပဲ။ ကျောင်းသားတွေ အလွတ်ကျက်ပြီး ဖြေသလို ဖြစ်နေတယ်။ ဒုဝန်ကြီး လာဖြေတာလည်း အလွတ်ကျက်တာကို လာရွတ်ပြသလို ဖြစ်နေတယ်။ ပထမဦးစွာ ဦးနုရဲ့ မေးခွန်းပေါ့။ .....မန္တလေး (၁၁)က ဦးစိုးအောင်၊ ပဲခူး(၂)က ဦးဖိုးဇော်၊ ဧရာဝတီ (၅)က ဒေါက်တာဌေးဝင်း စသည်ဖြင့် ဒေသရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ လိုအပ်ချက်တောင်းတယ်။ တစ်နှစ်မှာ တစ်ကြိမ်ပဲ လုပ်ပါတယ်။ လုပ်ပါ။ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ပဲ လုပ်ပါ။ ဒါကို မပြောလိုပါဘူး။ ဒါဝန်ကြီးဌာနရဲ့ အလုပ်ပဲ။ သို့သော် မှတ်သားထားရမယ်။ ဒါတက်လာလို့ရှိရင် အမှန်တကယ် လိုအပ်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး ရမယ်။ ကိုယ့်မှာလက်တံတွေ ရှိတာပဲ။ မြို့နယ်ပညာရေးမှူးစစ်၊ ခရိုင်ပညာရေးမှူးစစ်၊ တိုင်းပညာရေးမှူးစစ် တကယ်လိုတာလား။ တကယ်လိုတယ်ဆိုရင် မှတ်ထားမယ်။ ဒီနှစ် ဘတ်ဂျက်မမီရင် နောင်နှစ်ဘတ်ဂျက်။ အခု အစိုးရအဖွဲ့ ဘတ်ဂျက်မတင်ရသေးပါဘူး။ RE တောင် မတင်ရသေးဘူး။ ဘတ်ဂျက်ပါအောင် လုပ်လို့ရတာပဲ။ နောက်တစ်ခုကတော့ ဘတ်ဂျက်ကတော့ ပြီးသွားပြီ ထားပါတော့။ ခုနက ပြောသလို အချိန်မရွေး အန္တရာယ်ရှိသော ကိစ္စမျိုး သဘာဝ ဘေးဒဏ်ကြောင့် ဖြစ်ပျက်တဲ့ ကိစ္စမျိုးအတွက် ရန်ပုံငွေရှိဖို့ လိုတယ်။ ၀န်ကြီးဌာနမှာ ရန်ပုံငွေ ရှိရမယ်။ မမျှော်မှန်းနိုင်သော ဘေးဒဏ်ကိစ္စဖြစ်ရင် ချက်ချင်းလုပ်ပေးမယ်။ ၂၄ နာရီအတွင်း လုပ်ပေးမယ်။ ခုနက အန္တရာယ်ရှိတဲ့ကျောင်းဆောင် တကယ်လား။ လက်တွေ့သွားကြည့်။ အန္တရာယ် မရှိအောင် ချက်ချင်းပြင်ပေးမယ်။ အသစ်မဆောက် ပေးနိုင်ရင်တောင် အန္တရာယ် မရှိစေရဘူး။ ဒီလိုတော့ ဖြေဖို့ကောင်းတယ်။ တစ်ကြိမ်လုပ်ပါတယ်။ အဲဒါ ပြီးသွားပါပြီ။ မရှိပါဘူး။ တစ်ကြိမ် လုပ်ပါတယ်။ မရှိပါဘူးဆိုတာ အလွတ်ကျက်ပြီး လာဖြေနေတာနဲ့တူတယ် ဒုဝန်ကြီး။ အဲဒါကြောင့် နောင်လာဖြေတဲ့ အခါမှာ ခုနကလို လုပ်ပါ။ အရင်တစ်ခါ တုန်းကလည်း အရိပ်အမြွက် သင်ပေးလိုက်ပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပြီနော်။ အဲဒီလိုလေးတွေ။ မိမိရဲ့လုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲမှုကို နားလည်ပြီးမှ စနစ်တကျ လုပ်ပေးဖို့ လိုတယ်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တွေကလည်း မှတ်သားထားပါ။ ဘတ်ဂျက်မှာထည့်ဖို့ မှတ်သားထားပါ" ဟု ပြောကြားသည်။
Wed, Jun 27, 2012 at 9:49 AM
Isoflavone ဆေးအကြောင်းလေး သိချင်ပါတယ်ဆရာ။ သူငယ်ချင်းက သူ့အမေအတွက် သိချင်တယ်ဆိုလို့ပါ။ အမေ အသက်က ၆၆ နှစ်ပါ။ သွေးဆုံးပြီးသူများအတွက် အားဆေးဆိုလို့ပါ။ ဟုတ်ပါသလား။ ဟုတ်ရင် ဘယ်လောက်ကြာကြာ သောက်သင့်ပါသလဲ သိချင်လို့ပါ။ ဆိုးကျိုးကောင်ကျိုးများလည်း ပြောပြပေးပါဆရာ။
• Ease menopause symptoms သွေဆုံးခါနီးနဲ့ သွေးဆုံးပြီး ခံစားရတာတွေကို သက်သာစေတယ်။
ပဲပုပ်ထဲက Isoflavones ရဲ့ ဓါတုတည်ဆောက်ပုံဟာ Estrogen နဲ့ ဆင်တယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓာကနေ ထုတ်နေတဲ့ (အီစထိုဂျင်) ကို ဟန့်တားရာ ရောက်နိုင်တယ်။ ကောင်းစေတာရော ဆိုးစေတာပါ ဖြစ်နိုင်တယ်။ Natural antioxidants သဘာဝကနေရတဲ့ (အင်တီ-အောက်စီဒင့်) ဖြစ်တယ်။ ကင်ဆာကိုကာကွယ်ရာမှာ အသုံးကျတယ်။
ဝေဖန်သူတွေက ဒီဓါတ်ကြောင့် Epithelial hyperplasia အပေါ်ဖုံးအလွှာ လိုတာထက်ပိုပေါက်ပွါးနိုင်တယ်လို့ ပြောတာပါ။ ဖြစ်မှာကို အခွင့်အလမ်းများစေမယ်။ Goiterလည်ပင်းကြီး နဲ့ Hyperthyroidism လည်ပင်းကြီး ဟော်မုန်းများတာလဲ ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ ထောက်ပြထားတယ်။ လေ့လာမှုတွေ အများကြီးထဲက အကျိုးရစေတာကို ပြောတာက ပိုများတယ်။
Soy Isoflavones ဆေးကို Ovulation induction ကလေးရချင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ မျိုးဥထွက်စေဘို့လဲ ပေးတတ်တယ်။ Clomid ဆေးသဘော ပေးကြည့်တာဖြစ်တယ်။ ဆေးပေးနည်းကလဲ အတူတူဘဲ၊ ရာသီဆင်းပြီးပြီးချင်း ပဌမဆုံး ၅ ရက်မှာ ဆေးပေးရတယ်။ Isoflavones 150-200 mgaday ပေးတယ်။ ကလေးမရသေးသူများ ပဲပုပ်စားပါ။
• ၃၁-၁၂-၂ဝဝ၄ လေ့လာမှုတခုက Isoflavones (ISO) ကနေ Dual energy X-ray absorptiometry (DEXA) သုံးပြီး Bone mineral density (BMD) အရိုး သိပ်သည်းဆ အပေါ်သက်ရောက်မှုကို လေ့လာခဲ့တယ်။ သွေးဆုံးကာနီးနဲ့ ဆုံးကာစ ဂျပန်အမျိုးသမီး ၈၁ ယောက်ကို လေ့လာတာဖြစ်တယ်။ ISO (100 mg) ပေးတဲ့ အုပ်စုနဲ့ မပေးတဲ့အုက်စု ၂ ခုခွဲလေ့လာတယ်။ ၂၄ ပါတ်ကြာဆေးပေးတယ်။ လူ ၇ဝ က လေ့လာမှု အဆုံးထိ ပါတယ်။ ကောက်ချက်ကတော့ ISO 100 mg/day ရေရှည်ပေးရင် Menopausal bone resorption ကို ကာကွယ်ရုံသာမကဘဲ BMD များစေတယ်၊ Body fat အဆီနည်းစေတယ်၊ BMI ကျစေတယ်။ ပိန်မယ်။
• ဒါပေမဲ့ Soy isoflavone pills don't prevent bone loss ဒီ Isoflavone ဆေးကနေ အရိုးပျက်စီးတာကို မကာကွယ်နိုင်ဘူးလို့ ၉-၈-၂ဝ၁၁ နေ့ကလာတဲ့ ANI သတင်းမှာပါတယ်။
ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ = ဝမ်ချုပ်၊ လေပွ၊ ဝမ်းပျော့၊ ပျို့၊ အစာအိမ်အနေရခက်။
သူဟာမြေလတ်ပိုင်းက အခမဲ့ဆေးခန်းလေး တစ်ခုမှာ လာရောက်ကုသမှုခံယူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ။
သူ့ကိုတွေ့တော့ သူ့ရဲ့ထူးခြားမှုကို ပထမဆုံး သတိထားမိပါတယ်…၊
သူဟာ အခြားလူနာများနဲ့ ခပ်ခွာခွာထိုင်ရင်း မျက်နှာကို တဘက်ရှည်လေးတစ်ထည်နဲ့
ပါတ်ထားပါ တယ် .. ခေါင်းမြီးခြုံမလေးတွေလို သူ့မျက်လုံးကိုသာ မြင်နေရပါတယ်…
ဒီလိုနဲ့သူပြသခွင့်ရတဲ့အလှည့်အရောက်မှာ ..သူ ဆေးခန်းထဲကို ဖြည်းဖြည်းပဲ..
၀င်ရောက်လာပါတယ်..၊ သူ့နံဘေးမှာ အခြားလူနာများလို ဖေးမမယ့်လူနာစောင့်ပါမလာပါဘူး ။
ဒါနဲ့ စပ်းသပ်ခုတင်ပေါ် သူထိုင်ပါတယ်…
ဆရာဝန်နဲ့အတူ စမ်းသပ်မယ့် ဆရာမလေးက သွေးပေါင်ချန်စက် ကလေး
သူ့နဘေးချ ၊ ဆရာဝန်က သူ့ကို မေးပါတယ်…“ဘာဖြစ်တာပါလဲ” ….
“ဘာဖြစ်ပါသလဲ” သူ ဆရာဝန်ကိုကြည့်ပါတယ်.. နောက်ဆရာမလေးကိုကြည့်ပါတယ်…
ဆေးခန်းလေးဟာ တဒင်္ဂ တိပ်နေပါတယ်….
ဖြည်းညှင်းစွာဘဲ သူ့လက်တွေ စတင်လှုပ်ရှားပါတယ် …သူ့မျက်နှာကပါတ်ထားတဲ့.
သူနာပြုဆရာမလေး ရုပ်တရက် ခြေတစ်လှမ်းနောက်ဆုတ်သွားပါတယ်…
အံ့အားသင့်စွာနဲ့ဘဲ ခေတ္တ ဆိပ်ငြိမ်နေပါတယ်…သူ့ထံက စကားပြောဖို့ ကြိုးစားပါတယ်
တရှဲရှဲ အသံနဲ့ လက်ဟန်ခြေဟန်ဘဲပြနိုင်ပါတယ် သူ..စာရွက်နဲ့ဘောပင်တောင်းနေတာပါ
သူ့ရဲ့ စကားပြော ရာ အထောက်အကူပြု့ / ဋ္ဌာန် ၊ ကရိုင်းတို့ဖြစ်တည်ရာ .နှုတ်ခမ်းတစ်ခုလုံးနဲ့ ပါးတစ်ခြမ်းလုံးဟာ မရှိသလောက်ဖြစ်နေပါပြီ မျက်နှာရဲ့ တစ်ဝက်နီးပါးဟာ အနာအတိနဲ့ ရုပ်တရက်မြင်ရသူတို့ လန့်ဖြန့်သွားလောက်သလို…
လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်က ကွမ်းစားရင်း စဖြစ်ခဲ့တာပါဆိုတဲ့ သူရေးပြတာလေး ဖတ်ရလို့သိ၇ပါတယ် ၊ သူ့အကြောင်းကိုစာနဲ့ရေးပြခဲ့ပါတယ် ..သူ့အသက်က.
၄၀ ကျော်လောက်ပါ… သူ..ကွမ်းကို ခုံမင်စွာစားခဲ့ပါတယ် တဲ့ …
ဘယ်လောက်ထိကြိုက်ခဲ့ပါသလဲဆိုရင် ညအိပ်ရင်း ကွမ်းငုံအိပ်တဲ့ထိပါတဲ့ …
ကွမ်းစားဆေးများကိုလဲ ခုံမင်ပါတယ်..ဆိုင်ကပုံမှန်ယာပေးတာထက် ပိုထည့်ခိုင်းမိပါတယ်တဲ့ …
ဒီလိုနဲ့တနေ့တော့ သူ့ပါးစောင်မှာ အနာသေးသေး ဖြစ်လာပါတယ်…
သူအမှတ်တမဲ့ဘဲထားလိုက်ရာက …အနာက ပိုဆိုးလာပါတယ် …၊ ဆေးခန်းကို သွားပြဖြစ်ပါသေးတယ်
စားဆေးလေး သောက်လိုက်လို့ သက်သာသလိုရှိတော့ နောက်ထပ် ဆေးခန်းကို မရောက်ပြန်ဘူး ။
ဒီတစ်ခါထပ်ဖြစ်တော့ ပါးအပြင်ထိ အနာကဖောက်ထွက်လာပါတော့တယ် သူလက်လှမ်းမှီရာဆေးခန်းများပြရင်း ရန်ကုန်ကိုသွားကုဖြစ်ပါတယ် ၊ သမားတော်ဆီရောက်လို့ သံသယရှိ
တဲ့အတွက် သူ့အသားဆဲလ်ကိုယူပြီး ဓါတ်ခွဲခန်းမှာ စစ်ဆေးကြည့်တော့ ကင်ဆာပါတဲ့…။
သူစိုးရီမ်စိတ်နဲ့ တတ်စွမ်းသမျှ ပျောက်ကင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါတယ် … သူပိုင်ဆိုင်မှုဟာ သူ့ရောဂါကို.
ပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ထိ မလုံလောက်တော့ပါဘူး… သူ စိတ်လျှော့လိုက်ပါတယ်….
သူ့ရပ်ရွာမှာဘဲ သူခေါင်းချချင်ပါတယ် ..သူမြို့သူပြန်ပါတယ်…
ဒီလိုနဲ့ ဝေဒနာနဲ့ စိတ်ဒုက္ခကြားမှာ သူ့ရောဂါဟာပိုဆိုးလာပါတယ်…စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့နေလာခဲ့ရင်း…
သတင်းတစ်ခု သူကြားပါတယ်…သူနေတဲ့ မြိုလေးမှာ အခမဲ့ဆေးခန်းလေးတစ်ခု ဖွင့်ပါတယ်တဲ့..
သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကောင်းလေးဆီက သီတင်းလေးပါ ။
ဆိုက်ကားခမယူဘဲ နံက်ပိုင်းကုသခွင့်အတွက် တန်းစီရတဲ့ ခုံတန်းလေးမှာ သူ့ကိုပို့ပေးခဲ့ပါတယ် ၊
နောက် ဆိုက်ကားဆရာလေးက သူ့ကိုပြန်လာကြိုပေးပါတယ် ..။
ဒီလိုနဲ့ သူ အခမဲ့ဆေးခန်းလေးမှာ ဆေးကုသ ခံယူခဲ့ပါတယ်…၊ သူသိပါတယ်…သူဟာ မပျောက်ကင်းနိုင်ဘဲ ကင်ဆာဆဲလ်များရဲ့ နှိပ်စက်မှုဒဏ်နဲ့ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့မရဏမင်းရဲ့
သူ့အခြေအနေကိုသိသလို ဆရာမများနဲ့ဆေးခန်းလေးရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေလည်း သိကြမှာပါဘဲ
သူ အားနာစွာနဲ့ အီမ်မှာ နှစ်ရက်လောက်ငိုကြွေးနေမိပါတယ်…၊
ဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ တစ်ရပ်ထဲနေ လူနာတစ်ယောက် သူ့အိမ်ရောက်လာပါတယ် ဆေးခန်းကိုသူရောက်မလာလို့ စကားကြုံပါးလိုက်တာပါ …
သူမျက်ရည် ကျမိပါတယ်… ၊ဒီတစ်ခါတော့..သူ့မျက်ရည်ဟာ…သူ့အပေါ်ဂရုတစ်စိုက်ရှိလှပြီး စာနာမှု
အပြည့်နဲ့ ကမ်းလင့်လာတဲ့ မေတ္တာလက်များအတွက်… ကြည်နူးမှုအပြည့်နဲ့ ကျရတဲ့ “ပီတိ”မျက်ရည်စက်
သူကိုယ်တိုင်လည်း သိပြီးဖြစ်သလိုဆရာများနဲ့ ဆေးခန်းတာဝန်ရှိသူများလဲ သိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်
သူဟာ သေလူပါ ။
ဒါပေမယ့် သူကျေနပ်ပါတယ် …၀မ်းသာတယ်…ပီတိဖြစ်တယ်…
သူသေရရင်တောင်… လူသားတစ်ယောက်ရသင့်တဲ့ အပြည့်အ၀ စောင့်ရှောက်ကုသမှုကို ခံယူရတဲ့အတွက် …သူ.. ကျေနပ်ပါတယ်…စိတ်ချမ်းသာပါတယ်…
သူဟာ. အခမဲ့ဆေးခန်းလေးမှာ ( ၆ ) လလောက် လာရောက်ကုသမှုခံယူသွားပါတယ်( .၁၂ . ၀၇)
မှာသူဆုံးပါးသွားပါတယ်..။ဆေးကုသမှုခံယူနေစဉ်မှာဘဲ…သူ့ဆန္န သူ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ သူ့ကိုဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့ပါတယ်..၊
သူ့လိုကွမ်းချစ်သူများကိုဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ မှတ်တမ်းနဲ့ဓါတ်ပုံအတွက် ကြည်ဖြူစွာခွင့်ပြုချက်ပေးခဲ့ပြီး သူ့ဘ၀နဲ့ရင်းခဲ့ရတဲ့ သင်္ခန်းစာတစ်ခုကို အများသိရှိနိုင်စေဖို့ ခုလိုတင်ပြပေးရခြင်းပါ…။
Posted From Piti Charity Dispensary
ရန်ကုန်-ပြည်လမ်း၊ စော်ဘွားကြီးကုန်းကားမှတ်တိုင်တွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
၁၃.၁၀.၂၀၁၃ရက်နေ့ ၀၀၁၅ အချိန် အင်းစိန်မြို့နယ်၊စော်ဘွားကြီး
ကုန်းရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-ပြည်လမ်းဘေး ရန်ကုန်ဘက်မှ မင်္ဂလာဒုံဘက်သို့ သွားသည့်ဘက်ခြမ်းကားမှတ်တိုင်ရှိ ခရီးသည်နားနေဆောင်တွင်
ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ လူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိဘဲ ခရီးသည်နားနေဆောင် ယာဘက်ကပ်လျက်မြေကြီးတွင် အနက်(၃)လက်မခန့်နှင့် အကျယ်(၁)ပေပတ်လည်ခန့်ရှိ ချိုင့်ခွက် ဖြစ်သွားကာ ခရီးသည်နားနေဆောင်အတွင်းရှိ Natural Clay ဂျပန်အုတ်ကြွပ်အမိုး ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ် (၁၀)ပေခန့် ပျက်စီးပြီး ခရီးသည်နားနေဆောင်ထိုင်ခုံယာဘက်အစွန်း (၆)လက်မခန့်ပဲ့သွား
ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်အား မိုင်းရှင်းလင်းမှုပြုလုပ်စဉ် ၀၁၅၅အချိန် စော်ဘွား ကြီးကုန်းကားမှတ်တိုင်ရှိ Natural Clay ဂျပန်အုတ်ကြွပ်အမိုးကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ် ၀ဲဘက်ရှိ စည်ပင်
အလျား (၄)လက်မ၊ အနံ (၂)လက်မ၊ ထု (၁)လက်မရှိ C-4ယမ်း၊ ဒီတိုနေတာ၊ နိုးစက်နာရီ၊ ၀ါယာကြိုးများတပ်ဆင်လျက် လက်လုပ်မိုင်း (၁)လုံးအား ထပ်မံတွေ့ရှိသဖြင့် မိုင်းရှင်းအဖွဲ့မှ ရှင်းလင်းခဲ့ပါသည်။
(ပ)၁၀၉၀/၂၀၁၃၊ ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ၀တ္ထုပစ္စည်းများ
အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃အရ အမှုဖွင့်ပြီး စုံစမ်းဖေါ်ထုတ်